SAWIRRO: Dowadda Soomaaliya oo u hambalyeesay R/Warsaare Erdogan - Caasimada Online
Home Warar SAWIRRO: Dowadda Soomaaliya oo u hambalyeesay R/Warsaare Erdogan
SAWIRRO: Dowadda Soomaaliya oo u hambalyeesay R/Warsaare Erdogan
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay uguna hambalyeesay guusha ay soo hoyeen ra’iisal wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa AKP doorashooyinka dowladdaha Hoose ee dalkaas ka qabsoomay Axaddii shaley .
Warqad qoraal ah oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya loona gudbiyay safaarada Turkiga ee Muqdisho, ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo ra’iisal wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ay si weyn u soo dhaweeyeen guusha siyaasadeed ee Mr. Erdugan.
Doorashadii shaley ka dhacday Turkiga ayaa si weyn waxaa ugu guuleestay xisbiga AKP, kadidb markii ay heleen codadkii ugu badnaa ee la dhiibtay.
Guusha doorashada waxa ay ka dhigan tahay in ra’iisal wasaaraha Turkiga iyo xisbigiisa aad looga jecel yahay dalka Turkiga, in kastoo weli uu la kulmaayo mucaaradad xooggan oo kaga imaanaya gudaha iyo dalka.
Turkiga ayaa si weyn u caawiya Soomaaliya iyagoona ka wada mashaariic horrumarineed oo isugu jirra dhismooyinka waddooyinka, goobo caafimaad iyo Iskuulo.